Ọ bụla ọzọ na omume dị ka breeki aka? Edozi.
Breeki aka Guide
1. breeki aka Ntọala
2. breeki aka 10 Aghụghọ
3. breeki aka Rip DVD, Tọghatara AVI / MKV / ...
4. breeki aka Alternative
Breeki aka bụ a ma ama, na-emeghe-isi iyi, cross-ikpo okwu DVD Ripper na video Ntụgharị. Na ya, ị nwere ike tọghata DVD ma ọ bụ video ka mmachi video formats dị ka MP4 na MPEG-4 ma ọ bụ H.264 koodu. Otú ọ dị, breeki aka nwere ọtụtụ-agaghị emeli na video akakabarede.
Ọ na-akwado MPEG-4 faịlụ dị ka ọsọ ọsọ, na MPEG-4 ma ọ bụ MKV faịlụ dị ka mmepụta.
Ọ na-mkpọka mgbe emeso ezoro ezo DVD.
Ọ pụrụ nanị ka ị tinye faịlụ otu otu. Ị nwere ike iji ya na-ogbe tọghatara videos.
File mmepụta àgwà a mie ala. The mbụ video àgwà nwere ike ịbụ 100% chekwara.
Ọ bụrụ na i nwere nsogbu na-eji breeki aka ma ọ bụ na-achọ ịhụ ọzọ amamiihe breeki aka Ẹkot enweghị ihe ọ bụla (ọsọ ọsọ ma ọ bụ mmepụta) format mmachi, i nwere ike iji n'okpuru breeki aka Ẹkot maka Windows ma ọ bụ breeki aka Ẹkot maka Mac (Mavericks na Mountain odum gụnyere). Isiokwu a ga-enye ọtụtụ omume dị ka breeki aka na ike ime otu ihe ahụ na-arụ ọrụ n'ihi na ị na ka ị na-eme ihe.
Bido na Free breeki aka Alternatives maka Windows (Mountain odum & Mavericks)
Nke a breeki aka ọzọ na-ahapụ gị tọghata obodo na online vidiyo ma ọ bụ DVD ka QuickTime, DV, AVI, ma ọ bụ MPEG-4, ma wepụ audio si a nkiri. Ọzọkwa ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ "Tọghatara Ndị ọzọ Formats" ịhọrọ presets gụnyere iPhone, iPod na Apple TV. Ị nwekwara ike iji ya ewepụtụ, bee ma ọ bụ detuo gị videos.
A na ngwa na-ahapụ gị tọghata videos na ma ọ bụ ihe ọ bụla na usoro, dezie videos na kpochapụwo edezi atụmatụ (trimming, cropping ma ọ bụ tinye mmetụta), na ibudata vidiyo si na ọtụtụ ndị na saịtị. Nke a bụ ihe kacha mkpa bụ na ọ na-arụ ọrụ na 30 X kasị akakabarede ọsọ na-atọghata vidiyo na ZERO àgwà ọnwụ.
Ọ bụ ike nke na converting video, audio, DVD, foto, wdg Ọzọkwa ị nwere ike iji ya dezie videos ma ọ bụ mee foto sideshow. Akwado formats bụ MP4, AVI, MKV, WMC, 3gp, Blu-Ray, Android ma ọ bụ Apple ntị na ihe ndị ọzọ. Nke a breeki aka Ẹkot nwere ogologo-atụ interface. Onye ọ bụla nwere ihe ọmụma na video akakabarede ga-adịghị anya mara otú iji ya.
Get a Professional & Ike breeki aka Alternative
Niile n'elu ụfọdụ free uzo ozo ka breeki aka. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị akpan akpan banyere video mmepụta àgwà, video akakabarede ọsọ na faịlụ Ọkpụkpọ akwado, dị nnọọ-a Ẹkot breeki aka maka Win / Mac (gụnyere Mavericks na Mountain odum) - Video Converter Ultimate (Video Converter Ultimate for Mac) na-akwado ogbe ngbanwe DVD ma ọ bụ vidiyo. N'akụkụ ndị a uru, nke a niile-na-otu ngwa nwere ihe atụmatụ karịa breeki aka.
• Professional DVD Ntụgharị: Atọghata ọ bụla DVD na nwebisiinka nchebe na-abụghị nwebisiinka nchebe, gụnyere DVD nchekwa faịlụ, VOB, na iso wdg.
• Elu àgwà Video Ntụgharị: tọghata fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video ka fọrọ nke nta niile video ma ọ bụ ọdịyo formats, dị ka MP4, WMV, M4V, AVI, MOV, Flv, MKV, MP3 wdg
• Great DVD burner: ọkụ video ka DVD diski (DVD9 ma ọ bụ DVD 5), DVD nchekwa, .dvdmedia, ma ọ bụ iso maka DVD ndabere.
• Ike Video Downloader: Download ma ọ bụ weghara weebụ ọ bụla video ọsọ ọsọ na mfe.
• Smart 3D Ntụgharị: Mepụta ọ bụla 2D video ka 3D.
• amamiihe Video Editor: Cut, Split, jikota, bugharia, akuku, ewepụtụ videos ma tinye sobtaitel, video mmetụta, watermark, wdg
Ọzọ, Aga m tumadi-egosi gị otú tọghata videos ọ bụla ọzọ video na breeki aka ọzọ maka Windows dị ka ihe atụ, nke mere na ị nwere ike igwu ha na iPad, iPhone, na n'ebe ọ bụla ọzọ.
1 Tinye Videos faịlụ a usoro yiri breeki aka
Mgbe na-agba ọsọ nke a ngwa, i nwere abụọ mgbanwe ụzọ mbubata gị video faịlụ ka a breeki aka ọzọ.
Site na isi menu, pịa "Tinye Files" nhọrọ mbubata video faịlụ site na gị PC ka usoro ihe omume. (Cheta: Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata DVD faịlụ, dị nnọọ pịa "Ibu Ibu DVD" kama.
Dọrọ na dobe video faịlụ na ị chọrọ site na kọmputa si diski ike ka usoro ihe omume.
2 (Nhọrọ) Dezie gị videos na nke a breeki aka maka Windows (Mountain odum & Mavericks gụnyere)
Ọ bụrụ na e nwere otu video na ị chọrọ dezie, ị nwere ike dị nnọọ pịa Dezie bọtịnụ na video item mmanya a na ngwa si ebi ndụ. Na mgbe ahụ na ndị na-esonụ edezi window, ị nwere ike họrọ akuku video ọ bụla nke ihuenyo vidiyo ị chọrọ, ewepụtụ ọ bụla nke nke video, ma ọ bụ tinye watermark, sobtaitel na ndị ọzọ.
3 Họrọ otu video usoro ị chọrọ ka mmepụta format
Na ya mmepụta format ndepụta, a breeki aka ọzọ maka Windows (Mountain odum & Mavericks gụnyere) nwere ihe nile na-ewu ewu audio & video formats, na kachasị video formats kasị ewu ewu na ngwaọrụ. Dị nnọọ dị ka gị mkpa, dị nnọọ họrọ otu video format dị ka mmepụta usoro. Pịa format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke isi interface, na mgbe ahụ na-eche free họrọ ihe ị chọrọ na mmapụta mmepụta format window.
4 Malite video akakabarede
Na ala-nri n'akụkụ nke a breeki aka-dị ka usoro ihe omume bụ isi interface, ị dị nnọọ pịa "tọghata" button na-amalite video akakabarede. Ọ gwụla. Ọ ga-rụchaa ndị fọdụrụ ọrụ akpaghị aka. Na-echere usoro agaghị kwa ogologo. Ikpeazụ ihe ị chọrọ ime bụ nnọọ na-enwe mmepụta faịlụ na kpọmkwem ebe ị chọrọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ndị ọzọ ịwa usoro, dị nnọọ aga ndị nduzi nke Video Covnerter.
Biko ekiri video nkuzi nke a breeki aka Ẹkot.
> Resource> DVD> Nweta Best usoro dị ka breeki aka maka Windows (Mountain odum & Mavericks)